Vhura sosi webmail mutengi dzimwe nzira dzeGMAIL | Linux Vakapindwa muropa
Vhura sosi webmail mutengi dzimwe nzira dzeGMAIL
Nguva pfupi yapfuura pakanga paine dzimwe nzira dzakawanda dzemasevhisi eemail aivapo, ndichiri kurangarira kuti imwe yemisiyano mikuru kubva kune imwe kuenda kune imwe yaive kugona kwavakaita kubatanidza mafaera mahombe kana madiki. Ikozvino izvo zvapinda mumashure, mazhinji eaya masevhisi haasisipo uye mamwe anoramba achiramba se Yahoo, GMail uye Hotmail. Imwe yeanonyanya kushandiswa uye akabudirira pane ese anga ari eemail masevhisi eGoogle, GMail, yatiri kuzozivisa mamwe akanaka evhosi sosi nzira mune ino chinyorwa.
Emails pamwe neapapo mameseji masisitimu ndiwo marongero ezuva. Zvichida mune dzimwe nzvimbo maapplication e kutumira mameseji seTeregiramu kana Whatsapp vanga vachidzora zvishoma nezvishoma masevhisi eemail nekuti iwo akananga, asi iwo achiri akakosha uye acharamba achive kwemakore mazhinji. Asi iyo GMail mutengi haisi yega iyo iripo kure nazvo, kune vamwe vazhinji uye isu tichaenda kunonyora mamwe emamwe akanakisa mamwe akavhurwa sosi yakavhurwa sosi webmail vatengi:
round cube: ndeyemazuva ano webmail mutengi iyo inogona kuiswa nyore nyore pane LAMP server (Linux, Apache, MySQL, PHP).
Zimbra: isu takatotaura nezve uyu mutengi, uyo wekushandisa nayo webhu-based mail server uye mutengi. Rezenisi rayo, senge rapfuura, nderudzi rweGPL, uye iri sarudzo yakakurudzirwa.
SquirrelMail: ndiyo yandinoshandisa kunyanya, uyu mutengi ndewemazuva ano uye ane nyore nyore webhu interface kubva kwaanoitonga. Iyo yakanyorwa muPHP uye inoparadzirwa pasi peGPL rezinesi.
rainloop: yakanyanyisa mazuva ano, ine interface yekuvandudza ruzivo kana iwe wajaira kushandisa mamwe maindasitiri ekupindirana senge GMail pachayo. Inowanikwa pasi peAGPL uye unogona kutarisa ruzivo rwepurojekiti paGitHub.
mailspring- chirongwa chidiki uye chitsva chine sarudzo dzinonakidza dzekutsigira maakaundi akasiyana, dudziro, nezvimwe. Yakagadziriswa nemumwe wevagadziri veNylas Mail ...
Kune akawanda, asi aya ndiwo akakurumbira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Vhura sosi webmail mutengi dzimwe nzira dzeGMAIL
Santiago Inokosha akadaro
Mhoro munhu wese, ndine marezinesi mashoma ehupenyu, marezinesi kubva pamberi pa2012, iwo mashoma uye ini ndine gumi, makumi mashanu nevashandisi zana, iwo marezinesi andinotamisa kubva kudomain yangu kuenda kune yako, unogona kuona zvakawanda mu https://correovitalicio.com/
Kana domain ichishandisa Webmail kana sevhisi isiri iyo GSuite inogadzirirwa mumaawa mashoma, kana ukashandisa GSuite zvinodikanwa kudzima account uye kugadzirisa rezinesi nyowani uye zvinogona kutora mazuva maviri kana matatu
Pindura Santiago Vital
Instantnews: nyowani nhau kubva kune yako Linux terminal